Tụgharịa GNU / Linux gị ka ọ bụrụ Distro kwesịrị ekwesị maka mmepe Software | Site na Linux
Tụgharịa GNU / Linux gị ka ọ bụrụ Distro kwesịrị ekwesị maka mmepe sọftụwia
Ugbu a Linux bụ Eze n'ogo nke sistemu arụmọrụ nke ndị Ọkachamara na mpaghara teknụzụ Ozi (IT) jiri, ma ọ bụ na Sava ma ọ bụ na Ndị Njikwa Ihe Nlekọta Server, na ọkwa nke ndị mmepe Software nke afọ a ruru otu ọkwa ahụ site na ịgafe dịka nyocha ahụ Ndabere Onye Mmepụta Nyocha 2016 na Ebe 3 na 21,7% dị ka Mmepụta mmasị site Ebe 1 na 48,3% na Ndabere Onye Mmepụta Nyocha 2018.
Ka ọ dị ugbu a, GNU / Linux Applications Ecosystem nwere usoro dị mma ma dị mma maka mmemme sọftụwia (Ngwa na sistemụ) arụnyere nke ọma, hazie ma wụnye n'ime nkesa GNU / Linux ha nwere ike ikpuchi ọtụtụ ụdị asụsụ mmemme.
2 Ndị na-ebi akwụkwọ
2.1 Ọnụ editọ
2.2 Ndị editọ dị mfe na interface Graphical
2.3 Advanced editọ na Graphical Interface
2.4 Ngwakọta Editọ
3 Njikọ Mmemme Gburugburu
4 Akụrụngwa Development Software
5 Usoro njikwa sistemụ
6 Distros (GNU / Linux Nkesa)
6.2 Pụrụ iche
Ndepụta nke ngwa maka GNU / Linux nke anyị ga-enyocha ma emechaa bụ ugbu a ụfọdụ n'ime ndị kacha mara amara na ndị a kacha jiri rụọ ọrụ na ngalaba Software Development na sistemụ arụmọrụ a. A na-emelite ha ugboro ugboro ma na-akwado ya nke ọma.
Na ngwa ọ bụla ọhụụ na-apụta ma ọ bụ ngwa ọhụụ dị ugbu a abanye na ụwa Microsoft ma ọ bụ Apple, na-ewelite ogo nke ngwa nke enwere ike ịmepụta n'okpuru GNU / Linux.
Afọ ole na ole gara aga anyị mere ụfọdụ mbipụta na isiokwu a ndị ahụ kwesịrị ncheta na nyochaa, dị ka Kwadebe Ubuntu (ma ọ bụ distro ọzọ) maka mmepe weebụ y Ngwaọrụ m maka Development Web na Design na GNU / Linux. Ma taa, anyị ga-eme nyocha nke sara mbara na ha na Distros dị ugbu a kachasị maka mmepe sọftụwia.
Ngwa maka mmepe sọftụwia agbanweela ọtụtụ ogo na arụmọrụ karịa GNU / Linux si otú a na-enye nkwado dị mkpa (isi) nke mere na novice ma ọ bụ ọkachamara Software Developer nwere ike ịrụ ọrụ na Sistemụ arụmọrụ a n'ụzọ kachasị mma ma were ya dị ka sistemụ arụmọrụ ha kachasị mma
Mmepe Software na GNU / Linux: Ndị ndezi, IDE na Distros
Nke a bụ ihe na-echere anyị ugbu a GNU / Linux World na mpaghara Development Software:
Ndị na-ebi akwụkwọ
Onye ndezi ederede bụ mmemme na-enye gị ohere ịmepụta ma gbanwee faịlụ dijitalụ mejupụtara ederede nkịtị, nke a na-akpọkarị ederede ederede ma ọ bụ faịlụ ederede. Agbanyeghị, enwere ndị editọ Ederede edebere nke ọma ma nye ohere ma ọ bụ kwado mmata nke mmemme mmemme eji n'ime ederede, na-enyere nghọta na iji ya n'ime faịlụ ahụ. Fọdụ nwere ike ịbụ Terminal, ya bụ, na-enweghị eserese eserese, na ndị ọzọ nwere ike ịbụ Desktọpụ, ya bụ, iji eserese eserese.
N'ime ndị kacha mara amara ma jiri na GNU / Linux anyị nwere:
Nke a na-egwupụta
Editọ mara mma
Ndị editọ dị mfe na interface Graphical
Advanced editọ na Graphical Interface
Onye Okike Weebụ Web
Ederede Dị Nsọ
Njikọ Mmemme Gburugburu
An Integrated Programming Environment, nke akacha mara site na IDE acronym site na aha bekee "Integrated Development Environment", abughi ihe ọzọ mmemme ma ọ bụ ngwa ejiri rụọ ọrụ na nchịkọta akụkọ nchịkọta akụkọ, compiler, debugger, na onye nrụpụta eserese eserese. IDE nwere ike ịbụ ngwa nke aka ha ma ọ bụ na ha nwere ike ịbụ akụkụ nke ngwa ndị dị ugbu a.
Ụlọ ọrụ JetBrains Suite
QT Onye Okike
Ihe ngosi Visual Studio
Nku Python IDE
Akụrụngwa Development Software
A Kit Development Software, nke ihe otutu SDK mara site na aha Bekee "Software Development Kit", Ọ bụ ihe ọ bụla karịa usoro ngwaọrụ nke na-enyere Onye Mmepụta Software aka ịmepụta ngwa na sistemụ na-enye ohere ma na-akwado ọrụ maka otu mpaghara teknụzụ..
Ngwa ndị emere n’ime SDK ga-ekpebi ụfọdụ sistemụ arụmọrụ, ikpo okwu ngwaike, njikwa egwuregwu vidiyo ma ọ bụ ngwungwu sọftụwia pụrụ iche. Enwere ọtụtụ ihe SDK nwere ike ịnwe, otu n'ime ndị a bụ:
Ngwa mmemme mmemme (API).
Mgbakwunye mmepe gburugburu (SDI) na a Debugger na a Na-akpọkọta.
Koodu ihe omuma na akwukwo.
Un Onye Nkuzi nke gburugburu ebe obibi teknụzụ achọrọ.
.NET isi SDK
Usoro njikwa sistemụ
Sistemụ njikwa njikwa (ma ọ bụ sistemụ nyocha) bụ ngwakọta teknụzụ na omume iji soro na ịchịkwa mgbanwe emere na faịlụ oru ngo., ọkachasị na koodu ntinye, na akwụkwọ na ibe weebụ.
Sistemụ njikwa njikwa dabere na ịnweta nchekwa, nke bụ usoro ozi nke sistemụ na-achịkwa. Ebe nchekwa a nwere akụkọ ihe mere eme nke ihe niile ejiri jikwaa. Onye ọrụ ọ bụla nwere ike ịmepụta oyiri mpaghara site na imepụta ọdịnaya nke nchekwa ahụ iji nye ya ohere. Ọ ga - ekwe omume ịmegharị ụdị nke kachasị ọhụrụ ma ọ bụ ụdị ọ bụla echekwara n’akụkọ ihe mere eme.
Cheta na: N'ime ha niile Git bụ ọkacha mmasị maka nnukwu obodo ya, nnukwu mmepe na plugins sara mbara na ndị ahịa eserese. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere ndị ahịa mara eserese, gaa na njikọ a na ibe ya: Ndị ahịa eserese maka Git na Linux.
Distros (GNU / Linux Nkesa)
Sistemụ arụmọrụ eji eme ihe site na Linux Kernel na otu ngwa GNU nke na-enye ohere ịnye ndozi iji wụnye ya ngwa ngwa site na ngwaọrụ maka nhazi ya na njikwa njikwa ngwugwu maka ntinye nke ngwanrọ ọzọ. Nhọrọ nke nkesa na-adabere na mkpa onye ọrụ na uto onwe ya.
Na ọkwa Onye Mmepụta Software, anyị na-ahụ ihe ndị a akwadoro:
A na-atụ anya mwepụta nke 1.1 nke Distro MinerOS GNU / Linux na nso nso. nke na-adịghị ka nsụgharị 1.0 nke pụrụ iche maka ojiji na Homelọ, Office, Digital Mining and Computer Technicians, ọ ga - abụ ihe pụrụ iche maka ndị mmepe sọftụwia, ndị egwuregwu na ndị mmepe ọdịnaya ọdịnaya. Iji mụtakwuo banyere ọdịnihu nke ụdị nke Distro a ị nwere ike pịa aha ya: MinerOS GNU / Linux 1.1 (Onix) ma obu banyere ugbua MinerOS GNU / Linux 1.0 (Petro).
Ruo ugbu a, enwere m olileanya na akwụkwọ a baara gị uru nke ukwuuMa ọ bụ iji wụnye ọtụtụ ngwa na Distro gị dị ugbu a iji mee ka ọ dabara maka ndị mmepe Software ma ọ bụ kpebie iji otu akwadoro maka ha. Ruo mgbe ọzọ ederede!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ » Tụgharịa GNU / Linux gị ka ọ bụrụ Distro kwesịrị ekwesị maka mmepe sọftụwia
site na onye ọrụ ibe gị mbụ, tas sembrao
Zaghachi juliuco nikelado
Daalụ maka okwu gị! Ọ bụ ihe ọ alwaysụ mgbe niile ịmara na a na-agụ ma na-enwe ekele maka isiokwu ndị kwesịrị ekwesị site n'aka ndị na-agụ Blog.
Edemede dị ezigbo mma mana ekwenyeghị m akụkụ nke abụọ nke paragraf nke mbụ. GNU / Linux nwere ọtụtụ ụzọ ka mma iji bụrụ eze maka ndị mmepe, ma n'ezie ọtụtụ n'ime anyị na-eji ya eme ihe maka uru niile ọ na-eweta. Na kwa ụdị efu.
Na nkenke: M na-eji vim na plugins + 60, yana faịlụ nhazi 1400 nke nwere ọrụ m doziri na VimL iji mee ihe m chọrọ. M na-ejikọ ya na tmux multiplexer ka m wee nwee ike ịmegharị ọnụ ọnụ iji jiri vim yana ngwaọrụ niile nke Unix ecosystem: grep, sed, awk,… E wezụga git, n'ezie. Ihe niile site na ọnụ, yana ụzọ mkpirisi keyboard, na aha aha ya na nhazi nke ọma.
A na-echekwa nhazi nke vim m, tmux m, zsh (shei ọzọ na bash) na ọtụtụ mmemme ndị ọzọ ma bulite na repo ọha na eze na github. Maka ntinye ọ bụla dị ọcha nke GNU / Linux, naanị m ga-eji ya mepụta ya ma mepụta njikọta ahụ na stow. Enweela m nhazi ahụ nke werela m ọtụtụ afọ iji kpochaa njikere iji, na sekọnd ole na ole, na igwe ọ bụla na usoro Unix (ee, na Mac ọ ga-arụkwa ọrụ).
O doro anya na etinyeghị m onwe m maka mmemme na. Net ma ọ bụ na teknụzụ ọ bụla nke na-ebikọ ọnụ na sistemụ arụmọrụ nke otu ụlọ ọrụ ahụ: Windows. Ma ọ bụrụ na ọ ga-eme mmemme na Java, ọ ga-eji ezigbo IDE, ụdị ị kwuteghị: ndị sitere na JetBrains, nke a na-akwụ ụgwọ abụghị ihe kpatara ịghara ịkpọtụrụ ha.
PS: M na-eme mmemme na C / C ++, Gaa, Eke Ọgba na Perl, mana ejirila m ọtụtụ asụsụ, dị ka Basic, Bash, Lisp, eLisp, VimL, ​​Lua, PHP, na ntinye dị iche iche nke SQL. Ha niile na vim / neovim, nke ya na Emacs bụ ndị eze mmemme. Ha bidoro ọtụtụ afọ gara aga mana ha tozuru oke ma ha akwụsịghị ime mgbanwe, rue na nke taa ihe ha jiri gbawaa. Na ogo, naanị VSCode nke Microsoft na-abịaru ha nso n'ụzọ ụfọdụ, wee kụọ ha aka na C # (ọ bụ nke ị ga - eji ma ọ bụrụ na ị na - eme ihe mmemme na C #), mana ọ nweghị ihe ọzọ. Atọm na ST3 nọ n'azụ. Na ịghara ịkọ nano, nke bụ nchịkọta akụkọ, ebe ọ bụ na ọ nweghị ihe niile. xD
ị na-akọrọ gị .vimrc?
Achọrọ m ịmata 🙂
Ezigbo okwu, ma na-emekwa ka ọgaranya! Daalụ maka onyinye gị na-enye nkọwa banyere iji ngwa ndị a lekwasịrị anya na mmepe sọftụwia.
Diego de la Vega ebe obibi dijo
M hụrụ isiokwu gị n'anya. Ọ dị mkpa itinye (maka ex-Delphians / Pascalians) Lazarọs, nke bụ IDE zuru oke.
Daalụ maka ịkekọrịta echiche gị na Linux fans.
Zaghachi Diego de la Vega
ụlọ elu robot dijo
Daalụ maka ịkekọrịta, ezigbo edemede !!
Zaghachi na ụlọ elu robot
Amaara m na ọ bụghị ikpe, ma ndị ọzọ akwụkwọ niile ndị dere dee aha ha, ma, ebe a ọ na-akụ m na ha bụchaghị nwere na-egosi «Ing. Jose Albert »« Ing. » "Injinia" lol ọ na-agụ nnuku ego ma ọ bụ na ịchọrọ ide ya ka ewere ya xD
Emezila m nsogbu gị! Ekele, ihu ọma na ihe ịga nke ọma.
Ijuputa nzaghachi na URxvt M ga-agwarịrị gị na m dabere na Stack Overflow Developer Survey 2016 nke Linux Platform dị na 3rd ebe yana 21,7% dịka ọkacha mmasị nke ndị mmepe. Na nyochakwuo, ya bụ, na-achọ Stack Overflow Developer Survey 2017 na Stack overflow Developer Survey 2018, achọpụtara m na Linux Platform gbagoro na 24.2% iji nọrọ na 3rd ebe maka 2017 wee rute 48,3% na ọkwa na 1st ebe maka 2018.
Yabụ, ị kwenyere nke ọma, ya bụ, Linux Platform bụ Eze nke Ndị Ọrụ Software Software Operating Systems maka 2018 n'ụwa niile dịka ama ama World Page na Survey a ma ama.
Diego de la Vega etinyelarị Lazarọs na mbipụta ka IDE a bara uru ghara ịhapụ n'ime nkwenye.
Ya mere daalụ nke ukwuu!
Ee, mana agaghị m enyocha ogo nke GNU / Linux, Windows ma ọ bụ Mac n'ihe gbasara mmepe site na ọnụ ọgụgụ votu na nyocha, ebe ọ bụ na mgbe ahụ anyị daba na ad populum fallacy, ya bụ, «ọ bụ Eze n'ihi na ọ na-eji ya karịa ndị mmadụ ", mgbe ezigbo ga - abụ ịsị na" ọ bụ ya bụ Eze maka X ma ọ bụ maka ebumnuche Y ", ya bụ, iji esemokwu gosipụta ihe ekwenyela.
Na na 2017 na 2018 ojiji nke GNU / Linux n'etiti ndị mmepe na-aba ụba bụ naanị ihe na-egosi na ndị mmepe na-achọpụta na ọ na-ewetara ha uru, echekwara m na nke a nwere njikọ na mgbasa ozi nke GNU / Linux n'onwe ya.
Ee ọ bụ eziokwu na ihe ndị a niile juru m anya. Emacs bụ ngwa GNU mbụ na akụkọ ntolite mana oke omume ọma ya na-abịa mgbe emechara, dịka ama org-mode, na 2006, ma ọ bụ ọbụlagodi ngwa mgbakwunye maka git (magit), nke bụ otu n'ime ihe zuru oke ị nwere ike. chọta.
Vim bụ Vi emelitere, ọ nwekwara afọ ya ma achọpụtara m na ojiji ya na-eto eto, ikekwe nsị neovim nke agbakwunyere ọtụtụ mmelite, yana nke dị ihe dị ka 27.000 kpakpando n'agbanyeghị na ọ bụ naanị mmemme, ya bụ ịsị , na-enweghị eserese eserese.
An Emacs distro akpọ Spacemacs aghọwo ihe a ma ama, nke bụ njikọ dị n'etiti Vim na Emacs (ọ ka bụ nhazi omenala nke onye ọ bụla nwere ike ịme).
'Linux ricing' na-ewu ewu, nke bụ ejiji nke ịhazi GNU / Linux na enweghị gburugburu desktọọpụ (Gnome, ma ọ bụ XFCE, ma ọ bụ KDE, ma ọ bụ Nwunye, ma ọ bụ Unity, ma ọ bụ LXDE, ma ọ bụ LXQT, ma ọ bụ Enlightment, ma ọ bụ ...) mana ya na ndi nlezi anya window (dwm, xmonad, di egwu ma obu i3wm na mbu bu ndi kacha ewu ewu n’oge a).
Na mụ onwe m agbanweela. Akwụsịrị m iji Windows, emeela m ụzọ niile, m ejirila mmemme niile a kpọtụrụ aha n'isiokwu a na njedebe nke ụzọ m rutere n'ihe ga - abụ i3wm na vim / neovim (ha fọrọ nke nta ka ha dịrị ugbu a), tmux, ma na - agba mbọ -eme ihe niile kwere omume site na ọnụ, n'ihi na mma mma. Ruo n'ókè nke na: surfraw na-enye m ohere ịchọ ọtụtụ narị isi mmalite nke ozi, nke meghere na ihe nchọgharị nke ahazi, n'ọnọdụ m, w3m, nke na-arụ ọrụ n'ime ọnụ. Maka egwu: cmus. Maka nkata: irssi ma ọ bụ weechat. Shell zuru ezu karịa bash: zsh.
Ruo n'ókè m na m na-eji vim igodo (jiri h, j, k na l kama akụ) na ngwa niile a kpọtụrụ aha, yana mgbe m banyere web, ma na Chromium ma ọ bụ Firefox, m na-ejikwa ha, yana ọtụtụ plugins nke Ha anọwo kemgbe ọtụtụ afọ, ọ tụrụ m n'anya mgbe m chọpụtara ha: cVim, VimFX, Vixen, QuantumVim, wdg. N'ezie, igodo a na vim nwere ike rụọ ọrụ na Emacs (ọnọdụ ọjọọ), na Sublime Text (vintage), na Atom (yana plugins), na VSCode (yana plugins), na Qt Creator (nhọrọ), na JetBrains IDEs (nhọrọ) ...
Ihe a niile dị oke mmasi n'ihi na ihe ọ ga-adị ka ọ bụ n'ihi na ọ bụ agadi ma ọ bụ site n'oge gara aga ọ na-akwụsị iji ya na ngwa ọhụrụ na nke ka mma pụta, nke a emebeghị, ihe megidere ya. Ndị kacha ochie bụ ndị nwere ike ịgbatị agbatị, nwere ike ịhazi, nwee ọtụtụ plugins ma nwee ike ịme ọtụtụ ihe na nkenke.
Na 95 m na-eji Windows 95 eme ihe, m mụtara ịhazi ngwa ngwa. Amaliteghị m iji GNU / Linux ruo 2008 ma mgbanwe ahụ siri m ike, ọ na-efu m mana afọ ole na ole m gbanwere. Ejighị m Vim maka afọ 3, yabụ aga m eji ya kemgbe ihe dị ka 2015. Ọ dị ka ọ ga-abụrịrị ụzọ ọzọ, ọ bụghị ya? Ọ dị mma ịmata ihe, n'ihi na anaghị m ala azụ ma ọ bụ onye nzuzu xD
Maka ndekọ ahụ, Emacs na-eme karịa Vim, ebe Vim enweghị ike ịme ihe niile Emacs na-eme, mana Emacs mere karịa m rịọrọ (ọ dị ka OS) ebe Vim na-elekwasị anya na ịbụ onye editọ.
URxvt onyinye di oke nma dika nke ozo. Ahụmịhe gị na GNU / Linux dị mma… Olileanya ị nwere ike ịgwa anyị karịa site na nkọwa ndị ọzọ na mbipụta ndị ọzọ ma ọ bụ mbipụta nke gị. Have nwere blog ma ọ bụ weebụsaịtị nke gị?
Onix na Petros dijo
O bu ezigbo ederede rue mgbe m huru Onix na Petros xD !!!
Zaghachi Onix na Petros
Enwere m ịhụnanya na archlinux, dị ezigbo mma ọ bụ ezie na ihe niile gara aga m na-eji ma ha dị mfe ma dịkwa ukwuu. ekele maka post a
Zaghachi na dev.faiber
Daalụ maka nnukwu okwu gị… Greetings, Faiber!
LeoCAD: usoro mmemme CAD na LEGO